Ogaden News Agency (ONA) – Qaramada Midoobay oo Khatarta Isticmaalka Hubka Nuclearka Ah.
Qaramada Midoobay oo Khatarta Isticmaalka Hubka Nuclearka Ah.
Posted by Wariye Qaran	/ April 24, 2017
Khatarta in uu qarxo dagaal la isku adeegsado hub nuclear ah ayaa maraysa heerkeedii ugu sareeysay tan iyo wixii ka danbeeyay markii uu dhamaaday dagaalkii qaboobaa ee dunida. Warbixin kasoo baxday Qaramada Midoobay (QM) ayaa sidaa lagu yiri, waxayna kusoo aaday arintan xilli ay xiisad ka dhex aloosantahay dalalka heysta awoodda nuclearka ee Mareeykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
Cilmi-baadhis uu sameeyay machadka Qaramada Midoobay u qaabilsan cilmi baarista hub-ka-dhigista (UNIDIR) ayaa lagu sheegay in dunidu wajaheeyso “Masiibooyin kusoo fool leh” taa oo ka iman karta in ka badan 15,000 oo hub Nuclear ah oo ay heystaan sagaal wadan.
Waxay ka digtay QM in isticmaalka hubkan uu keenayo kalsooni darro, taasoo ay sababi karta baa lagu sheegay warbixinta in hubku galo gacanta qaldan, oo ay ula jeedaan kooxo argagixiso ah.
Mareeykanka iyo xulufadiisa ayaa haatan ku howlan in ay ka jawaab celiyaan gantaalladii ugu danbeeyay ee ay tijaabisay Kuuriyada waqooyi, iyo tijaabadii lixaad ee Nuclear oo la aaminsanyahay in ay sameeysay, taasoo xukuumadda Washington ay u aragto mid halis ku ah xasiloonida caalamka.
Maamulka Trump ayaa rajaynaya in Shiinuhu ku caawin doono in la xakameeyo awoodda Kuuriyada waqooyi. Dowladda Shiinaha ayaa saaxiib dhow oo dhanka ganacsi la ah dowladda Kuuriyada Waqooyi.